Tsy afaka mamatsy ny tenany amin'ny angovo biomass mandritra ny iray volana i Espana | Green Renewable
Tsy afaka mamatsy herinaratra biomassa afa-tsy amin'ny faran'ny taona i Espana
Ny angovo azo havaozina dia miditra amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny vokatra tsara kokoa. Niainga haingana ny angovo biomassa tany Espana, rehefa tamin'ny 21 Novambra 2017, Andro Bioenergy Eropeana, ny kontinanta azontsika dia nahafa-po ny angovo rehetra angovo avy amin'ny biomassa.
Amin'ireo olan'ny angovo azo havaozina ireo dia fantatsika tsara fa tara any aoriana i Espana. Eto Espana, ny andro Bionenergy dia omaly 3 Desambra, ary ny Fikambanana Espaniôla ho an'ny fanamafisana ny biomassa (Avebiom) dia nanambara fa ny biomass residu dia azo ampiasaina bebe kokoa ary hamatsy angovo any Espana amin'ny havaozina. Moa ve i Espana afaka manome ny fangatahany amin'ny angovo biomassa ihany?
1 Fampiasana biomassa mahomby
2 Tanjona hampandroso ny andro fankalazana
3 Fiankina amin'ny akora avy any ivelany
Fampiasana biomassa mahomby
Ny habetsaky ny angovo biomassa ampiasaina any Espana dia mitombo satria ny biomassa fambolena dia loharanon-karena angovo eo an-toerana izay azo ampiasaina tsy tapaka ary mandritra ny taona. Ny vidim-piainana amin'ity karazana biomass ity dia mora kokoa noho ny biomassa avy amin'ny ala. Noho izany dia ilaina ny fampitomboana ny fampahalalana sy ny fanentanana momba ny fampiasana biomass fambolena hihaonana amin'ny tinady angovo any Espana ary hampihena ny fampiasana solika fôsily izay mampitombo ny emissions sy mandoto bebe kokoa.
Tombony lehibe amin'ny biomassa noho ny angovo hafa azo havaozina hafa dia ny mora apetraka ary azo iainana ara-toekarena, satria afaka mamokatra angovo ampy. Iray amin'ireo loharano mahomby indrindra amin'ny biomassa fambolena nomena ny vokariny dia ny an'ny voaloboka.
Ao amin'ny tatitry ny tetikasa farany FIAINANA ViñasxCalor Ny fehin-kevitra dia namintina fa azo atao ny mampiroborobo ny fampiasana ny fanetezam-boaloboka ho loharanon-kery ao amin'ny faritra Penedés (Barcelona). Noho ny fampiasana an'ity loharanon'angovo azo havaozina ity dia azo natao ny nampihena ny fihinanana solika fôsily.
Raha tsara tantana ny fitantanana sy ny fampiasana ny biomassie fambolena any Espana, ny Andro Bioenergy any Espana dia azo entina mankany amin'ny 25 Novambra, toy ny any Frantsa, izay mihabe noho ny salan'isa eropeana, dia ny 21 Novambra. Ity Andro Bioenergy ity dia andro izay, nanomboka tamin'io fotoana io, i Espana dia tsy afaka manome biomassa afa-tsy amin'ny faran'ny taona. Ankalazaina ny fiandohan'ity andro ity, hidika izany fa manana hery bebe kokoa hamoronana angovo azo havaozina avy amin'ny biomassa isika.
Tanjona hampandroso ny andro fankalazana
Mba hampandrosoana ny andro fankalazana dia ilaina ny sisa tavela amin'ny mololo sy ny fanetezam-boaloboka avy amin'ny faritra fambolena. Manantitrantitra i Avebiom fa misy ny mety lehibe amin'ny famokarana herinaratra biomassa ary tsy araraotina. Ny loharanom-baovao ahazoana angovo bebe kokoa aza dia ny doro ala, ny fanetezana oliva ary ny voankazo ary ny voaloboka. Raha ampiasaina tsara kokoa ireo loharano ireo dia azo ahena ny fanjifana solika fôsily sy ny fiankinan'izy ireo.
Ny fahaleovan-tena mandritra ny 28 andro dia midika fa azonao atao izany tsy miankina amin'ny angovo tsy azo havaozina mandritra ny iray volana, satria azo havaozina sy mahazatra eto Espana ity angovo ity, tsy miankina amin'ny fanafarana solika na gazy.
Fiankina amin'ny akora avy any ivelany
Tsy manana ny akora rehetra ampiasaina amin'ny fanjifana angovo avy amin'ny biomass eto amin'ny taninay i Espana. Izany hoe, raha misy akora sasany, toy ny biofuel, Avy any ivelany izy ireo fa tsy avy amin'ny taninay. Ohatra, ny pellet ampiasaina hiteraka herinaratra dia ampidirina avy any Portugal.
Etsy ankilany, ny fitaovana ampiasaina amin'ny boiler biomass ao an-trano dia azo avy amin'ny fananantsika manokana avy amin'ny tanintsika. Ny biomassa dia ampiasaina amin'ny isan-jato avo indrindra ho an'ny fanafanana trano sy indostria. Amin'ny ambaratonga kely kokoa dia ampiasaina ho biofuel sy ho an'ny herinaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Tsy afaka mamatsy herinaratra biomassa afa-tsy amin'ny faran'ny taona i Espana
Ny maha-zava-dehibe ny tsingerin'ny rano ho an'ny planeta
Fambolena rivotra mahery eto an-tany